Obodo ise dị ọnụ ala na United States | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | America, United States
E nwere ọtụtụ ndị na-ezere ịgagharị na United States n'ihi na ha chere na njem ga-adị oke ọnụ ma ọ bụ na ha agaghị erute mmefu ego iji nwee anụrị ihe niile. Ma eleghị anya, ị bụ onye na-ahọrọ ka njem na a azu paaki na a ole na ole euro gị n'akpa uwe, na nke a, edemede a bụ maka gị.
Enwere ọtụtụ obodo na United States ị nwere ike ịga leta ma nwee obi ụtọ ọbụlagodi na ịnwe oke ego. Ationgbọ njem dị ọnụ ala ma ị nwere ike ịchọta ọrụ dị ọnụ ala ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ maka ndị ọbịa, n'ihi ya, ọ dị mma n'ihi na ị gaghị eri obere ego ma ọ bụ ihe ọ bụla iji nwee ọ enjoyụ ezumike gị n'obodo ndị a nke United States.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịga North America iji chọpụta ihe ịtụnanya dị na ya ma tinyekwa onwe gị n'ule ahụ iji kụziere ụwa na ọ ga-ekwe omume ịga na-etinyeghị nnukwu ego, wee gụọ akwụkwọ n'ihi na ị ga-enwe mmasi ịmara ndị a obodo ... dee!
N'ezie, mgbe ị gụrụ aha obodo a ihe nkiri ama ama ama site n'aka omee Tom Hanks na-abata n'uche, mana na mgbakwunye na nke ahụ, ọ ga-amalite ibute n'uche n'ihi na ọ bụ obodo nwere ike iwetara gị ọtụtụ ihe na-enweghị akwụ ụgwọ. oke ego.
Etinyewo m obodo a na ndepụta kachasị elu n'ihi na ọ bụ nnukwu obodo ị ga-eleta na obere ego yana na Filadelfia ị nwere ike ịme ọtụtụ ihe n'efu. Ebe saịtị ndị nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme anaghị ana nbata. Ọ dị ịtụnanya ebe ọ bụ na a ga-eji gị ibi na mba nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebubo gị maka iku ume, mana na nke a ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ebe ndị a na-amasị mmasị akụkọ ihe mere eme dịka:
Onye Liberty Bell
Independlọ Nnwere Onwe
Bank nke mbu nke America
Templelọ ndị Masons
Rodlọ Rodin Museum
A ogologo wdg ...
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, ị nwekwara ike ịchọta ebe ị ga-ehi ụra dị ka ụlọ oriri na ọ hostụ hotelsụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ọnụ ahịa kachasị ọnụ ahịa nwere ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka.
Las Vegas abụghị naanị ebe ọtụtụ mmadụ ga-agba akwụkwọ iji mee agbamakwụkwọ gbara gharịị - ọ dị ka ọ bụrụla nke ochie - kamakwa ọ bụ paradaịs nye ndị nwere obere ego. Enwere ọtụtụ ndị na-eche na ọ bụrụ na ha ejiri obere ego gaa Vegas ha ga-apụ na ya site na nnukwu ekele maka ụlọ ịgba chaa chaa na ụlọ ịgba chaa chaa dị na ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịgba chaa chaa abụghị ezigbo nhọrọ iji jide n'aka na ego, yabụ ọ bụrụ na ị nwere obere ego, ọ kacha mma ịghara ịbịaru ụlọ ịgba chaa chaa nso n'ihi na ị nwere ihe ọghọm nke ịchụpụ ihe ọ bụla.
Mana na Las Vegas ị nwere ike ịchọta ọtụtụ azụmahịa ụlọ oriri na nkwari akụ, nri dị ọnụ ala na mmemme dị ọnụ ala ma ọ bụ maka obere mmefu ego.. Ọ bụ obodo nke anaghị ehi ụra, na ọkụ na-enwu mgbe niile na na ị nwere ike ịnụ ụtọ mgbe niile na njem dị ọnụ ala dịka:
Gondolas nke Venetian
Halllọ Egwuregwu Egwuregwu
Isi iyi Chocolate na Bellagio
Ndị casinos na ịgba chaa chaa kwa ụbọchị - mana cheta ihe m gwara gị n'ahịrị ndị dị n'elu.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ akụkọ ihe mere eme, mgbe ahụ ebe a dị mma maka gị dịka ọ bụ otu n’ime ebe akụkọ ihe mere eme kachasị. Ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị na Washington DC Ha nwere nnabata n'efu ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ịma mma ya niile n'emeghị ka obere akpa gị.
Otu ihe atụ nke ụlọ ebe ngosi ihe mgbe ochie bụ:
Ebe a na-eli ozu Arlington
Houselọ White House
Ememe Ncheta Lincoln
Ememe Ncheta Vietnam
Museumlọ ihe nkiri Naval
N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ga-eme ka ọbịbịa gị baa uru.
Ọzọkwa, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, n'oge ọkọchị, a na - enwekarị ọtụtụ egwu na mmemme ndị ọzọ na - enweghị n'efu. N'obodo a, a na-ekwe nkwa ekpori ndụ na-enweghị ego ọ bụla, gịnị ọzọ ka ị ga-arịọ?
Na ebe nke anọ anyị nwere ike ịchọta obodo Baltimore. Obodo a nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ọ na - enyekwa gị ohere ịmara ya n'efu iji gbasaa ihe ọmụma gị ma bịaruo nso ịmata obodo ị na - eleta.
Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịchọta ọrụ ndị anaghị akwụ ụgwọ dịka:
Rigo na Ncheta Washington
Gaa Leta Edgar Allan Poe si Tumbra
Gaa na Fort Mchenry
Stroll site na ọmarịcha Little Italy -nke ị ga-n'anya, n'agbanyeghị-.
Ọ bụghị ụgha ma ọ bụrụ na m gwa gị na Orlando abụghị otu n'ime obodo ndị kachasị ewu ewu maka njem nlegharị anya na United States, mana kama ọ bụ maka njem nleta si mba ọzọ. Enwere ọtụtụ ndị njem nleta nwere mmasị ịmara obodo a juputara na ihe ịtụnanya nye ndị ọbịa ya. Ọzọkwa, ọ bụ obodo dị ọnụ ala, yabụ na ị gaghị adọkpụ akpa gị nke ukwuu iji nwee obi ụtọ n'ihe niile ọ na-echere gị.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị gaa Disney ma ọ bụ Universal ama ama ha abụghị ebe dị ọnụ ala, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ọnụ ala ị nwere ike ime iji nwee ọ enjoyụ ezumike gị dị ọnụ ala na Orlando. You chọrọ ụfọdụ ihe atụ iji nwee ike ịnụ ụtọ ọnụ ala obodo? Ebumnuche:
Rollerblading tinyere Orlando si ọmarịcha coastline
Gaa na Lego imagination Center
Gaa Ripley Museum
Gaa na Sciencelọ Ọrụ Sayensị
Ga-esi mara Museum nke insgbọ oloko na trolleybuses
Dị ka ị hụworo, e nwere ọtụtụ atụmatụ ị pụrụ ime n'obodo ise ndị a magburu onwe ha na ị nwere ike ịchọta na United States. Maka nke a, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga North America mana ịchọrọ ịga na mmefu ego, họrọ otu - ma ọ bụ ọtụtụ - obodo ndị m kpọtụrụ aha ka ezumike gị, na mgbakwunye na izu oke, dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịga obodo ọ bụla n’obodo na mmefu ego, egbula oge ịgwa anyị maka ahụmịhe gị wee gwa anyị ebe ndị dị ọnụ ala na ndị nke kachasị amasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Obodo 5 dị ọnụ ala karịa na United States
Akwa, nke a bụ ihe m na-achọ. Eziokwu bu na maka anyi bu ndi choro ihu otutu ihe na obere ego, ihe ndia bu ọla edo.
Zọ 3 gafere Spain maka ụmụaka, ndị ntorobịa na ndị okenye